Qarax Xoogan oo Saakay Gil Gilay Caasimadda Muqdisho
December 15, 2016 – Wararka inaga soo gaaray Nawaaxiga Guriga Hooyooyinka ayaa sheegay in goordhaw uu qarax aad u xoogani oo si weyna looga maqlay inta badan xaafadaha magaalada Muqdisho uu ka dhacay agagaarka Guriga Hooyooyinka ee magaalada Muqdisho.
Warar horudhac ah oo ina soo gaaraya ayaa sheegaya, in qaraxu uu ka dhashay gaari waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyay oo la soo dhigay nawaaxiga Maqaayada The Village gaar ahana dhinaca barxada weyn ee iskaashatooyinka.
Wararka qaar aan heleyno ayaa sheegaya in gaariga qarxay uu daba socday uuna eryanayay gaari nuuca dagaalka ah oo ay wateen ciidamo katirsan dowladda .
Wali lama oga qasaaraha dhabta ah ee ka dhashay qaraxan xoogan ee saakay gil-gilsy caasimadda Muqdisho, waxaana goobtii uu qaraxu ka dhacay si deg deg ah isugu gadaamay ciidamada Nabad sugida iyo kuwa Booliska.
Wixii SAWIRRO ama VIDEO’ah ee soo Kordha Kala Soco Halkan.
Gaari qarax lagu soo xiray oo Maanta ku Qarxay Magaalada Muqdisho (SAWIRRO) October 10, 2018